Niresaka tamin'ny Emirates Airlines i Bartlett mba hampiditra sidina manokana mankany Jamaika
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Jamaika » Niresaka tamin'ny Emirates Airlines i Bartlett mba hampiditra sidina manokana mankany Jamaika
Airlines • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Karaiba • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • Vaovao Mafana Jamaika • Vaovao • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Vaovao farany UAE
Minisitry ny Fizahantany Jamaika, Hon. Edmund Bartlett (ankavanana) dia niarahaba ny Senior VP Commercial Operations - Americas, Salem Obaidalla an'ny Emirates Airlines, taorian'ny fivoriana namokatra tao amin'ny foiben'ny orinasa Dubai. Nandritra ny fihaonana, izay natao ny 24 oktobra, no niresahan’izy ireo ny mety hisian’ny tolotra manokana eo amin’i Dubai sy Jamaika, ho fankalazana ny Andron’i Jamaika ao amin’ny Dubai Expo 2020, hotanterahina amin’ny Febroary 2022.
Minisitry ny Fizahantany Jamaika, Hon. Edmund Bartlett, dia nanambara fa nanomboka ny fifanakalozan-kevitra tamin'ireo solontena ambony ao amin'ny Emirates Airlines, miaraka amin'ny tanjona ny hampiditra sidina miavaka eo anelanelan'i Dubai sy Jamaika amin'ny fiandohan'ny taona ho avy. Ny fanambarana dia tonga rehefa namarana ny hetsika ara-barotra tao amin'ny Emirà Arabo Mitambatra (UAE) omaly ny Minisitra, niaraka tamin'ny fihaonana lehibe tamin'ireo mpanatanteraka ambony ao amin'ny Emirates Airlines tao amin'ny foiben-dry zareo Dubai.
Nisongadina tamin'ny adihevitra ny mety hisian'ny tolotra manokana eo amin'i Dubai sy Jamaika, ho fankalazana ny Andron'i Jamaika ao amin'ny Expo 2020, Dubai tamin'ny Febroary 2022.
Nisy ihany koa ny fifanakalozan-kevitra namokatra momba ny fahasitranana amin'ny fizahantany sy ny fiaramanidina.
Andrasana ny fifanakalozan-kevitra fanampiny ahafahan'ny Emirates mandray anjara feno kokoa sy ireo mpiara-miombon'antoka hafa any Afovoany Atsinanana.
Ny singa iray lehibe amin'ny adihevitra midadasika dia ny mety hampidirana serivisy manokana eo anelanelan'i Dubai sy Jamaika, ho fankalazana ny Andron'i Jamaika tao amin'ny Expo 2020, Dubai tamin'ny Febroary 2022. “Nifanaiky izahay hijery ny maha-mety ny fandaminana ity sidina ity, izay hamboarina haingana araka izay azo atao ny antsipiriany. Nisy ihany koa ny fifanakalozan-kevitra namokatra momba ny fizahan-tany sy ny fahasitranana amin'ny fiaramanidina ary ny endrika endrika V tsara niainan'i Jamaika sy Dubai, "hoy i Bartlett.
Miandrandra fifanakalozan-dresaka bebe kokoa amin'ny tontolon'ny paikadin'ny toerana maro amboarina any amin'ny faritra avaratr'i Karaiba izy mba hahafahan'ny Emirates mandray anjara feno kokoa sy ireo mpiara-miombon'antoka hafa any Afovoany Atsinanana. Emirates no zotram-piaramanidina lehibe indrindra any UAE, ary ny Moyen Orient amin'ny ankapobeny, miasa mihoatra ny 3,600 sidina isan-kerinandro.
Raha tany Emirà Arabo Mitambatra, ny Minisitra Bartlett sy ny ekipany dia nihaona tamin'ny Sampan-draharahan'ny Fizahantany ao amin'ny firenena mba hiresaka momba ny fiaraha-miasa amin'ny fampiasam-bola amin'ny fizahantany avy amin'ny faritra; hetsika fizahantany any Afovoany Atsinanana; ary ny fidirana amin'ny vavahady ho an'i Afrika Avaratra sy Azia ary ny fanamorana ny fiaramanidina. Nisy ihany koa ny fivoriana niarahana tamin’ireo tompon’andraikitra ao amin’ny EMAAR, izay azo lazaina fa ny fampiantranoana lehibe indrindra sy manana ny maha izy azy sy ny mpamolavola ny fananan-tany/fiarahamonina any Afovoany Atsinanana; DP World, iray amin'ireo seranan-tsambo lehibe indrindra eran-tany sy orinasa lozisialy an-dranomasina; DNATA, mpandraharaha fitsangatsanganana lehibe indrindra any UAE ary TRACT, mpandraharaha fitsangatsanganana matanjaka any India.
"Ny fihodinana amin'ny hetsika ara-barotra nataonay sy ny ekipako niaraka tamin'ireo mpiara-miombon'antoka lehibe amin'ny fizahan-tany sy ny lozisialy ao UAE dia tena nahavokatra. Izany dia tsy isalasalana fa hiafara amin'ny fizotry ny fiarovana ny fampiasam-bola, tsena ary vavahady vaovao avy any Afovoany Atsinanana, Azia/Azia Minora ary Afrika mankany Jamaika sy ny sisa amin'ny Karaiba, "hoy ny minisitra Bartlett nanazava.
Avy any Emirà Arabo Mitambatra, ny minisitra Bartlett dia handeha ho any Riyadh, Arabia Saodita, izay hitenenany amin'ny andiany faha-5 amin'ny Future Investment Initiative (FII). Ny FII amin'ity taona ity dia ahitana resadresaka lalina momba ny fahafahana fampiasam-bola vaovao eran-tany, famakafakana ny fironana indostrialy, ary tambajotra tsy manam-paharoa eo amin'ny CEO, mpitarika eran-tany ary manam-pahaizana.
Hanatevin-daharana azy ny senatera, Hon. Aubyn Hill amin'ny maha-minisitra tsy misy portofolio azy ao amin'ny Minisiteran'ny Fampandrosoana ara-toekarena sy ny Famoronana Asa (MEGJC), manana andraikitra amin'ny Rano, Tany, Fandraharahana Outsourcing (BPO), ny Fahefana ara-toekarena manokana ao Jamaika ary ireo tetikasa manokana.
Ny sabotsy 6 novambra 2021 no hiverenan’ny minisitra Bartlett eto amin’ny nosy.